Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina :: Homen’ny Ceni fe-potoana 48 ora aorian’ ny rahampitso ireo mbola ho kandidà • AoRaha
Fifidianana ben’ny tanana sy mpanolotsaina Homen’ny Ceni fe-potoana 48 ora aorian’ ny rahampitso ireo mbola ho kandidà
Famindram-po farany. Mihamaro ireo kandidà mitaraina sy mangataka fanalavam-potoana any amin’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) noho fahasarotan’ny fanangonana an’ireo antontan-taratasy sasany tsy maintsy ilaina amin’ny firotsahan-kofidiana amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra ho avy izao.
Manoloana izany, nambara tetsy amin’ny foiben’ny Ceni, Alarobia omaly, fa hisy fe-potoana 48 ora fanampiny homena an’ireo sokajin’olona hilatsaka hofidiana ben’ny tanàna sy mpanolotsaina, na dia efa nolazaina afak’omaly aza hoe: “tsy hisy fanalavam-potoana intsony”.
Nohazavain-dRandriamanantsoa Philibert Hervé, filoha lefitry ny Ceni, fa: “hatramin’ny rahampitso no afaka mametraka ny filatsahan-kofidiany any amin’ireo Rafitra misahana ny fanaraha-maso ny firotsahan-kofidiana isaky ny distrika (Ovec) ireo kandidà na mbola misy tsy ampy aza ny taratasiny. Hahazo 48 ora fanampiny izy ireo avy eo, ka mandritra an’io fotoana io no tokony hanararaotana hamenoana ny taratasy banga. Lazaina etoana kosa fa ireo izay efa nahavita nanatitra ny filatsahan-kofidiany ara-potoana teny amin’ny Ovec ihany no hisitraka an’ity fanalavam-potoana farany ity”.
Nampahafantarina omaly ihany koa fa mbola vitsy ireo kandidà nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiany teny amin’ny Ovec. Amin’ireo kaominina miisa dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo manerana ny Nosy dia valo amby dimampolo hatreto ny isan’ireo kandidà ben’ny tanàna. Roa amby dimampolo kosa ireo mpifanandrina ho eo amin’ny toeran’ny mpanolotsaina.
Tsy mitsahatra manao fanentanana ny Ceni amin’izao iray andro tsy hikatonan’ny fanaterana filatsahan-kofidiana izao.
Fitsidihana teto Madagasikara :: Naneho ny hafaliany sy ny fahafaham-pony ny Papa Fransoa